SAADAAL: Kooxdee Hanan Doonta Premier League? Yaase Afarta Sare Ku Dhameysan Doona? Super Computer Ayaa Saadaashiisii Ugu Dambeysay Sameeyay. | Hohad News
SAADAAL: Kooxdee Hanan Doonta Premier League? Yaase Afarta Sare Ku Dhameysan Doona? Super Computer Ayaa Saadaashiisii Ugu Dambeysay Sameeyay.
March 10, 2019 - Written by Hohad Office
WARARKA CIYAARAHA(hoha-news)Liverpool kuma guuleysan doonto horyaalka Premier League sida uu saadaaliyay Super Computer-kii looga bartay inuu saadaaliyo sida uu ku dhamaanayo horyaalka Premier League fasalkaan, tani waxey ka dhigan tahay in Pep Guardiola uu horyaalkiisii labaad oo xiriir ah qaadi doono hadii ay wax u dhacaan sidaan.
Reds ayaa tartan xoog leh ugu jirta hanashada horyaalka Premier League, waxeyna Jurgen Klopp iyo wiilashiisa doonayaan iney soo afjaraan abaarta baahsan ee kooxdaan ka heysata horyaalka, 29-sano kadib ayeyna dooneysaa iney hanato horyaalka iyo markii ugu horreysay Premier League.
Jurgen iyo wiilashiisa haatan hal dhibic ayey ka hooseeyaan dhigooda City, waxaana la sameeyay saadaasha ku saabsan dhamaadka horyaalka iyo sida ay kooxaha u gali doonaan 20-ka kaalmood.
Waxey saadaasha sheegtay in hal dhibic ay Manchester City ku qaadi doonto horyaalka, iyadoo aruursan doonta 98-dhibcood, halka Reds ay aruusan doonto 97-dhibcood.
Marka laga hadlo saadaashaan, Red Devils ayaa ku dhameysaneysa afarta sare iyadoo sanadka soo aadan sidaas uga qeyb gali doonta koobka horyaalada yurub, waa hadii ay saadaashu sidaas u dhacdo.Ole Gunnar ayaa hormar fiican sameeyay, wuxuuna suuragal ka dhigay rajadii dhimatay oo ay jamaahiirta Red Devils ka qabeen u tartanka afarta sare iyadoo ay xusid mudan tahay iney tijaabo adag berito la gali doonaan Arsenal kulan ka dhici doona Emirates Stadium.
Labada kooxood ee London ka dhisan (Arsenal iyo Chelsea) ayaan fursad u helin afarta sare, walow ay heystaan fursad kale oo ah hanashada Europa League, kooxaha Fulham, Huddersfield Town iyo Cardiff ayeyna saadaasha sheegtay iney heerka labaad u laaban doonaan.